Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Nanao lahateny nandritra ny Andron'ny Fizahantany Afrika ireo minisitry ny fizahantany malaza
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Nizeria • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny minisitry ny Fizahantany Jamaika Edmund Bartlett dia ho isan'ireo minisitry ny fizahantany dimy handray fitenenana mandritra ny hetsika izay nahasarika olona manan-danja hizara ny traikefany sy ny fomba fijeriny momba ny fizahantany any Afrika mandritra sy aorian'ny valan'aretina COVID-19.
Minisitry ny fizahantany dimy malaza no handray anjara, avy eo dia nanome voninahitra ny andiany faharoa amin'ny Andron'ny Fizahantany Afrika izay hotanterahina any Lagos, renivohitra ara-barotra any Nizeria ny marainan'ny zoma izao.
Ny Andron'ny fizahantany any Afrika (ATD) andiany faharoa dia hatao any amin'ny renivohitra ara-barotra any Nizeria ny 25 Novambra ka hatramin'ny 26 Novambra 2021.
eTurboNews dia mivantana mivantana ny Andron'ny Fizahantany Afrika, ary afaka manatrika ny Zoom ny mpamaky.
Ny hetsika dia miara-miasa amin'ny Birao fizahantany afrikanina ary ny Tambajotra fizahan-tany manerantany
Minisitry ny Fizahantany Jamaika Dr. Edmund Bartlett
Minisitra hafa voatendry handray anjara amin'ny hetsika dia i Moses Vilakati, Minisitry ny Fizahantany sy ny Tontolo Iainana ao amin'ny Fanjakan'i Eswatini, Hon Phildah Nani Kereng, Minisitry ny Tontolo Iainana Botswana, Harena Voajanahary, Fiarovana ary Fizahantany.
Ny hafa dia ny Dr. Meunatu Pratt, minisitry ny fizahantany sy ny kolontsaina Sierra Leone ary ny Dr. Damas Ndumbaro, ny minisitry ny harena voajanahary sy ny fizahantany ao Tanzania.
Ny minisitry ny fizahantany sy ny kolontsaina teo aloha ny Repoblikan’i Seychelles ary ny filohan’ny Repoblika Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) Hon. Alain St. Ange Izy no olo-malaza hafa ao amin'ny indostrian'ny fizahantany aty Afrika mandray anjara avy eo dia miteny amin'ny hetsika African Tourism Day.
Ny filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany (ATB) Hon. Alain St. Ange
Birao fizahantany afrikanina Filoha mpanatanteraka Mr. Cuthbert Ncube Efa vonona ihany koa ny hifanakalo hevitra ary hizara olana mifandraika amin'ny fizahantany sy vakoka manankarena ao Afrika mandritra ny hetsika ATD.
Filohan'ny filankevi-pitantanana Afrikana Atoa Cuthbert Ncube
Ny hetsika ATD dia nahasarika mpampianatra ara-pizahantany manerana ny kaontinanta Afrikana, Etazonian'i Amerika, Eoropa ary firenena hafa eran'izao tontolo izao mba hifanakalo hevitra, hizara hevitra tsara ary hifanakalozana traikefa manankarena amin'ny fomba tsara indrindra izay hanampy amin'ny fampivoarana ny fizahantany afrikanina. ary Afrika manontolo amin'ny tsenan'ny fizahantany manerantany.
Mitondra ny lohahevitry ny “Fifandimbiasana ny fizahantany, ny varotra ary ny faharetana, ny imperatives ho an'i Afrika, mandritra ny vanim-potoanan'ny COVID-19”, ny hetsika faharoan'ny Andron'ny fizahantany afrikanina dia hanasongadina ireo lova sy tolotra manankarena atolotra eo amin'ny sehatry ny fizahantany afrikanina.
Nambaran’ny Komitin’ny Fikambanana Iraisam-pirenena (IOC) ny fampiantranoana ny andiany faharoa amin’ny Andron’ny Fizahantany any Afrika, izay kasaina hatao virtoaly.
Ny Andron'ny Fizahantany Afrika dia natokana hifantoka amin'ny kaontinanta Afrikana ho hetsika kaontinanta, izay mampivondrona ny governemanta, ny vondron'orinasa, ny mpandray anjara ary ny hafa ao amin'ny rojom-pizahantany sarobidy mba hamahana ireo olana mahakasika ny sehatra.
Ny ATD dia noforonina avy eo mba hitondrana ireo olo-malaza ara-pizahantany, anisan'izany ny mpanao politika nasionaly, ny mpandray anjara amin'ny fandraharahana, ny mpitsidika ary ireo mpilalao fizahan-tany hafa mankalaza ny haren'i Afrika, hoy Rtoa Abigail Adesina Olagbaye avy ao amin'ny Desigo Tourism Development and Facility Management Company.
Ny tanjon'ny ATD, ankoatry ny hafa, dia ny hankalaza sy hanehoana an'i Afrika eo amin'ny sehatra maneran-tany, ny herin'ny kolontsaina sy ny fananan'ny fizahan-tany isan-karazany, ny lova ary ny fahafaha-manao amin'ny lafiny rehetra amin'ny heviny, ny hatsarany ary ny toetrany, hoy Rtoa Abigail.
Ny hetsika ihany koa dia hitondra ireo Afrikana any am-pielezana sy ireo firenena Afrikana hafa, naman'i Afrika mba hankasitraka ny hasarobidin'ny indostria iray izay mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy miteraka asa, miteraka fidiram-bola ary manatsara ny fivelomana sy ny fiaraha-monina manerana ny kaontinanta.
Ny ATD ihany koa dia hanatsara sy hifantoka ao anatin'ny sehatry ny fizahantany afrikanina ary hampisongadina ireo fanamby sy olana manakana ny fitomboan'ny fizahantany sy ny fampandrosoana.
Hanisy sari-tany ihany koa ny vahaolana ho amin’ny fitomboana, ny fanambinana ary ny fandrosoan’ny sehatry ny fizahantany, indrindra ny fampiroboroboana ny faharetany sy ny fitahirizana azy.
Hanentana ny taranaka ho avy amin'ny fahalalana sy ny fankasitrahana ny lova ara-kolotsaina sy voajanaharin'i Afrika ity Andro ity, ary koa hamorona sy hanamora ny fifandraisana amin'ny “Afrika ho an'ny Afrikana” sy ny sakaizan'i Afrika izay mety hanova ny vinavinan'ny fizahantany ao amin'ny kaontinanta ho lasa fandraharahana sy fampiasam-bola.
Ireo mpandray anjara amin'ny Andron'ny Fizahantany Afrika dia ho anisan'ny tantara ary avy eo dia hahita andiany hafa mahaliana amin'ny hetsika sonia an'i Afrika izay manokana andro kaontinanta hahatsiarovana isan-taona ny fizahan-tany sy ny fandraisany anjara lehibe amin'ny toekarena Afrikana.
Ny Andro ihany koa dia hanoritra ny lalan'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny fizahantany ho an'ny kaontinanta Afrikana, avy eo hampivondrona ny fandraharahana, ny fampiasam-bola, ny fahafahana mifandray amin'ireo mpandray anjara ao anatiny sy ivelan'ny indostria.
Ireo mpandray anjara amin’ny hetsika ihany koa, dia hahazo fahalalana sy hetsika tokony horaisina raha mahakasika ny fizahantany, ny varotra, ny faharetana ary ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Hetsika maro no hanamarihana ny Andron'ny fizahantany any Afrika izay antenaina hiparitaka manerana ireo firenena afrikanina amin'ny alàlan'ny fampielezam-peo virtoaly.
Natomboka tamin’ny taona 2020 (tamin’ny taon-dasa) ny Andron’ny Fizahantany any Afrika izay nandraisan’ny firenena 79 anjara ary mpandahateny 21 avy amin’ny firenena 11.
Tsindrio eto raha hanatevin-daharana ny fihaonambe Zoom